🥇 ingxelo yencwadi yezikhalazo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 843
ingxelo yencwadi yezikhalazo
Ividiyo yobalo lwencwadi yezikhalazo
Uku-odola ingxelo yencwadi yezikhalazo
Incwadi yezikhalazo kufuneka igcinwe ngokuchanekileyo. Ukuze lo msebenzi wenziwe ngokugqibeleleyo, kufuneka usebenzise isoftware ekumgangatho ophezulu kunye neyenziwe kakuhle. Isoftware yenqanaba eliphezulu iklanywe yinkqubo ye-USU yeSoftware. Iingcali zayo zibandakanyeka ekugcineni inkqubo yophuhliso kwinqanaba elifanelekileyo kwaye kwangaxeshanye bafikelele kumaxabiso asezantsi xa kuthelekiswa nabakhuphisana nabo abaphambili.
Inqanaba eliphezulu ukhuphiswano lwesoftware lwenza ukuba kube lula ukujongana ngokukhawuleza nayo nayiphi na imisebenzi enzima. Ukuguqukela kwinkqubo ye-USU yeSoftware, inkampani efumanayo ifumana ithuba lokuhlawula ixabiso elifanelekileyo lokugcina ukubalwa kwencwadi. Oku kunenzuzo kakhulu kwaye kuyasebenza, njengoko kuvumela ukuza ngokukhawuleza kwimpumelelo kwaye kwangaxeshanye kuchitha ubuncinci bemali yezixhobo zemali. Isoftware ye-USU ihlala ikulungele ukubonelela ngenkxaso yezobuchwephesha kwinqanaba eliphezulu lobungcali. Iingcali zayo ngabasebenzi abaphambili kwaye banelona nqanaba liphezulu lobuchule ekujonganeni nezicelo zabaxhasi.
Umsebenzi wencwadi ngokungenasiphako kwaye izikhalazo zinokufunyanwa ngokuzenzekelayo. Umyinge wengqwalaselo ekufuneka unikwe kulawulo lweenkqubo zeofisi. Yiyo loo nto inkampani ikhula ngokukhawuleza kwaye ihlala kwezona ntengiso zinomtsalane ngesantya esiphumayo. Ii-algorithms ezilungiselelwe rhoqo ayisiyiyo kuphela inqaku lokuqokelelwa kweshishini elichazwe ngasentla. Inkqubo ye-USU yeSoftware iyabandakanyeka ekudalweni kwezicelo kungekuphela kwincwadi yobalo yezikhalazo, kodwa ikwanazo zonke iinkqubo. Uhlobo ngalunye lwesoftware luvumela ukufezekisa ngokukhawuleza imisebenzi ebekiweyo, kwaye ngaloo ndlela ufumane ukhuphiswano olubalulekileyo. Imenyu yemveliso ye-elektroniki ibekwe kwicala lasekhohlo lesikrini. Oku kulunge kakhulu njengoko kuvumela ukuhamba ngokukhawuleza. Inkqubo yokufunda isoftware yokugcina incwadi yezikhalazo ayithathi xesha lide kwaphela. Endaweni yoko, ngokuchaseneyo, umsebenzisi uyisebenzisa kakuhle le mveliso ngexesha lokurekhoda, kwaye ke angene kwi-niches ekhokelayo kwintengiso. Zonke iinkcukacha ezikule mveliso ye-elektroniki zahlulwe zaziifolda ezifanelekileyo. Iifolda zithetha abathengi, izicelo, kunye namanye amacandelo anexabiso elifanelekileyo lolwazi.
Le ncwadi inokusetyenziswa nokuba ngumqeshwa ongenamava, kwaye kuthathelwe ingqalelo efanelekileyo kwizikhalazo. Ukuqhuba nayiphi na inkqubo kwenziwa lula kwaye ke oko kunika amandla okukwazi ukuqhubekeka ngokukhawuleza naziphi na ii-algorithms. Ifemu yokufumana izinto iba yinkokeli yokwenyani, ethe yakodlula okhuphisana nayo kwaye yakwazi ukudibanisa indawo yayo ukuze ikhawulelane nezicelo ezingenayo. Ukudayala ngokuzenzekelayo yenye yemisebenzi eyongezelelweyo, ngenxa apho ishishini, ligqibe ekubeni lithenge isicelo, linokusebenzisana ngokukhawuleza nabathengi. Izikhalazo ze-ledger software nazo zinokuthumela ngokuzenzekelayo i-imeyile eninzi kwaye ke ziphumelele. Emva kwayo yonke loo nto, inkampani iyakwazi ukwazisa ngokukhawuleza abaphulaphuli ekujoliswe kubo kwaye oku kulunge kakhulu.
Uyilo lweemodyuli zolu setyenziso lwenza ukuba kubengcono ukwenza uluhlu lwemisebenzi ejongene nenkampani. Kukho imodyuli eyongezelelweyo enoseto olubizwa ngokuba 'yireferensi'. Isicelo sencwadi yezikhalazo senza ukuba sikwazi ukwenza imisebenzi yokukhangela ngokuxhomekeke kumasebe apho isicelo esihambelanayo senziwa khona.
Ulwakhiwo olubanzi lwequmrhu lwenza ukuba kube lula ukunxibelelana nenani elikhulu labathengi kwaye ungadideki. Inkqubo yokufaka isicelo sencwadi yezikhalazo ikunika ithuba lokukhuphisana ngokulinganayo namanye amashishini, kwanabo banezixhobo ezininzi abanazo. Injini yokukhangela yefomathi yangoku lolunye uncedo olwahlulahlula le mveliso kuphuhliso oluphambili.
Ukuqhubekeka kwezicelo kunokwenziwa ngabasebenzi, iinombolo zesicelo, umhla wesicelo, kunye nezinye izikhombisi. Inqanaba lokuzaliseka komyalelo ikwayenye yeekhrayitheriya ezivumela ukubalwa kwemali yolwazi olufanelekileyo. Ubunzima incwadi accounting izikhalazo kwenza kube lula ukuba basebenzisane ngokugqibeleleyo kunye nabasebenzi. Umqeshwa ngamnye ufumana kanye loo misebenzi ayabelweyo.
Ukurekhoda iiparameter zomsebenzi kwesi sicelo luphawu lwaso olwahlukileyo. Ubunzima bokugcina incwadi yezikhalazo kubalo-mali luvumela ukulandelela nayiphi na ingcaciso, enikezwe injini yokukhangela elungiselelwe ngokugqibeleleyo. Umyinge wabathengi abafake izicelo kwabo bafumene le nkonzo unika ithuba lokuqonda ukuba isebenza njani isebe lentengiso. Isisombululo esibanzi sokugcina incwadi yezikhalazo sinokusebenza kunye nogcino-zincwadi zokugcina impahla, siyisebenzise ngokuzenzekelayo. Inkqubo ekhankanyiweyo ngaphambili yolawulo lobungcali kwincwadi yezikhalazo ivumela ukusebenza ngesibali-xesha, esilelwe ukubhalisa iintshukumo zomsebenzisi. Inkqubo yobhaliso lomsebenzi yenziwa ngokuzenzekelayo, efanelekileyo kakhulu kuba igcina izibonelelo zabasebenzi. Ubalo lwee-algorithms zihlala zitshintshwa kusetyenziswa ukusebenza okukhethekileyo. Ubunzima benzelwe imowudi yabadlali abaninzi, kodwa inokusetyenziswa ngokukodwa.
Inkqubo yezikhalazo iye ibe sisixhobo esingenakubekwa endaweni kunye nomgangatho ophezulu wombane kwinkampani yomthengi. Ngoncedo lwayo, imisebenzi yobalo-mali yayo nayiphi na intsonkothe isonjululwe, eya kuthi ivumele inkampani ukuba ikhawuleze ifezekise iziphumo ezinomdla kukhuphiswano. Isisombululo esimbaxa sisingatha zonke iinkqubo zobalo ngokukhawuleza nangokufanelekileyo, ngaphandle kokushiya iinkcukacha eziyimfuneko zingakhathalelwanga. Xa kugcinwa ubalo lweencwadi, abantu akufuneki bachithe ixesha elininzi, kwaye banokunikezela ngezixhobo ezigciniweyo kweminye, ebaluleke ngakumbi, kunye nemisebenzi yoyilo.
Ukwenza ingxelo ngeeodolo
Ukuphendula ngezimali malunga nokuzaliseka kwee-odolo
uphendlo lwezicelo zomsebenzisi
Uhlalutyo lomsebenzi kunye nezicelo
Isicelo sokwenziwa komsebenzi ekunikezelweni kweenkonzo
Iinkqubo zolawulo ezizenzekelayo
Inkqubo yolwazi oluzenzekelayo uku-oda
Ukuzenzekelayo kokuqhubekeka kwesicelo
Ulawulo lweeodolo zabaxumi
Icandelo lolawulo kunye nokunyanzeliswa
Ukulawulwa kunye nokuqinisekiswa kokwenziwa
Ulawulo kwicandelo lokufaka iiodolo
Ukulawulwa kokwenziwa kwemiyalelo
Ulawulo lokuzaliseka kwee-odolo
Ulawulo lomyalelo wabathengi
Inkqubo yenkxaso yoMthengi
Ugcino lwedatha lokugcina iiodolo
Isiseko sedatha yee-odolo
Ukujongana nezikhalazo zabathengi
ISebe lolawulo lokwenziwa kwamaxwebhu
Khuphela i-log ye-elektroniki yeeodolo zomsebenzi wobalo
Khuphela ii-odolo zenkqubo yobalo
Inkqubo yolawulo loku-odola kwamashishini
Iifom zolawulo lokwenziwa
Iindlela zolawulo lokuqhutywa
Iingxaki zolawulo lokuphunyezwa
Iimpawu zokwenza ingxelo kwicandelo leenkonzo
Iifom zentlangano yolawulo lokuphunyezwa
Ukuphuculwa kwenkqubo yolawulo lomgangatho wenkonzo
Iinkonzo zolondolozo lweenkqubo zolwazi
Iinkqubo zolwazi zoku-odola
Ukungena kwi-odolo yemisebenzi
Ukugcina incwadi yezikhalazo neengcebiso
Ulawulo lokuthengwa kunye neeodolo
Ulawulo lokuthenga nokufaka iiodolo
Ukubeka iliso ekuzalisekeni komyalelo wokuthenga
Ulawulo lwee-odolo zokusebenza
Ukulungiswa kunye nokugcinwa
Inkqubo yokuhanjiswa kweodolo
Ulawulo kunye nokubulawa
I-metric yolawulo lwe-odolo
Iimodeli zolawulo lweodolo
Uku-odola kuphuhliso lwenkqubo yolwazi
Inkqubo yokulandela umkhondo
Umbutho wolawulo kunye nokuqinisekisa ukusebenza
Umbutho wokulawula ukwenziwa kwezicelo
Umbutho womsebenzi wenkonzo yolwazi
Cwangcisa ulawulo lokwenza
Inkqubo kunye neendlela zokulawula ukwenziwa
Inkqubo yokujonga ukwenziwa kwezivumelwano
Inkqubo yolawulo lokuqhutywa
Inkqubo yokwenza ingxelo kwabaxumi kunye neeodolo
Inkqubo yokuzalisa izatifikethi
Inkqubo yokusebenza nezicelo
Ukulawulwa komgangatho wokuphunyezwa komyalelo
Ukwamkelwa nokubhaliswa kwezicelo
Irejista yezikhalazo kunye nezicelo
Ukubhaliswa kwezicelo zekhompyutha
Ukubhaliswa kwezicelo ezivela kumaziko asemthethweni
Inkqubo yobhaliso lwezicelo
Cela inkqubo yolawulo
Inkqubo yolawulo lokuhanjiswa kweenkonzo
Inkqubo yolawulo lomgangatho wenkonzo
Ispredishithi somyalelo wobalo
Amanqanaba omsebenzi ngezicelo
Iinkqubo zolawulo uku-odola
Iinkqubo zoku-odola ngekhompyutha
Inkqubo yokwenza izicelo zomsebenzi
Inkqubo yokufaka iiodolo
Inkqubo yezicelo zobalo
Inkqubo yolawulo lwezicelo
Inkqubo yokusebenza kunye nezicelo
Iinkqubo zokwenza umsebenzi
Inkqubo yokusebenzisa ulawulo lwentsebenzo
Umsebenzi kunye nenkqubo yocwangciso-mali
Umsebenzi wenkonzo yolwazi
Inkqubo yokusebenza kunye nezikhalazo
Sebenza ngamabango kunye nezikhalazo zabathengi
Sebenza kunye nezicelo zabaxumi
Sebenza ngezikhalazo namabango
Sebenza ngezikhalazo neengcebiso
Sebenza ngezikhalazo kumbutho
Sebenza nezicelo ezingenayo
Sebenza nemibutho yezicelo